Saika aretin’ny voa ny ankamaroany, ka natao grefy ary mbola marefo ara-pahasalamana. Voaroaka tamin’ny trano nitoerany ny sasany.
Efa nisy iray namoy ny ainy, teo ampiandrasana ny fotoana ahafahana mody aty Madagasikara. Maro amin’izy ireo koa no tsy salama noho ny tsy fahampian'ny an-tanana intsony.
Araka ny fantatra dia vonona hiantoka ny saran’ny fodiany izy ireo ary milaza fa vonona ny hanaja ny fepetra ara-pahasalamana amin’ny fihibohana vao tonga eto Madagasikara, ary hanefa ny sazy raha mandika ny fepetra mifanaraka amin’izany izy ireo.